China IECEE- CB Ọrụ na Ule | MCM
Gịnị bụ Asambodo CB？
IECEE CB bụ usoro izizi mba ụwa izizi maka ịnakwere akụkọ nyocha nke akụrụngwa. NCB (Ngalaba Asambodo Mba) ruru nkwekorita nke otutu, nke na enyere ndi oru aka inweta asambodo mba site na ndi otu ndi ozo n’okpuru atumatu CB na-ebufe otu asambodo NCB.
Asambodo CB bụ akwụkwọ atụmatụ CB nke enyere ikike site na NCB ikike, nke bụ iji gwa ndị NCB ndị ọzọ na ngwaahịa ndị a nwalere ga-eme ka ọ dị ugbu a.
Dị ka ụdị akụkọ tozuru etozu, akụkọ CB depụtara ihe ndị dị mkpa sitere na ọkọlọtọ IEC site na nke ọ bụla. Nkwupụta CB abụghị naanị na-enye nsonaazụ nke nnwale niile, mmesho, nkwenye, nyocha na nyocha na nghọta na enweghị nghọta, kamakwa gụnyere foto, eserese sekit, eserese na nkọwa ngwaahịa. Dịka iwu nke atụmatụ CB, akụkọ CB agaghị adị irè ruo mgbe ọ ga-eweta akwụkwọ CB ọnụ.
Gịnị mere anyị ji chọọ Asambodo CB?
Directka ịmatazed ma ọ bụ Nkwadoed site na so mba
Site na akwụkwọ CB na akwụkwọ nyocha CB, a ga-ebupụ ngwaahịa gị na mba ụfọdụ ozugbo.
Gbanwee na mba ndị ọzọ asambodo
Enwere ike igbanwe akwụkwọ CB ozugbo na akwụkwọ nke mba ndị so na ya, site na ịnye asambodo CB, akụkọ nyocha na akụkọ nnwale dị iche (mgbe ọdabara) na-emeghị ule ahụ, nke nwere ike belata oge ntinye akwụkwọ.
Gbaa mbọ hụ na nchekwa nke ngwaahịa
Nnwale asambodo nke CB na-eleba anya n'iji ngwaahịa eme ihe yana nchekwa nwere ike ịhụ mgbe ekwesịrị iji ya. Ngwaahịa a nwapụtara gosipụtara afọ ojuju maka nchekwa nchekwa.
Iru eru: MCM bụ CBTL enyere ikike izizi nke IEC 62133 nke TUV RH ruru na China.
● Asambodo na ikike nnwale: MCM so na ndị mbụ nyocha na asambodo ndị ọzọ maka ụkpụrụ IEC62133, nke mechara karịa 7000 batrị IEC62133 batrị na akụkọ CB maka ndị ahịa ụwa.
● Nkwado teknụzụ: MCM nwere ihe karịrị ndị injinia teknụzụ 15 ọkachamara na ule dịka ọkọlọtọ IEC 62133. MCM na-enye ndị ahịa nkwado zuru ezu, nke ziri ezi, nke mechiri emechi nke ụdị ọrụ aka na ọrụ ozi na-eduga.
Nke gara aga: Taiwan- BSMI
Osote: North America- CTIA
Ọnụ Asambodo Iecee
Usoro Asambodo Iecee
Ọrụ Asambodo Iecee
Iecee na-ebute oge
Ndebanye aha Iecee
Ihe ndi ichere choro
Akwụkwọ Iecee nke teknụzụ
Iecee Nka na ụzụ chọrọ
Ihe anwale nke Iecee
Usoro Ule nke Iecee
Nkwupụta Nnyocha Iecee
Elọ nyocha Nnyocha Iecee
Laboratory Ume Iecee
Ahịa Nnwale Iecee
Ọrụ Nnwale Iecee
Oge Nnwale Iecee